BBC Siyaasi caan ah oo qirtay in uu tuug ahaan jiray | Biyoguurenews.com
Home Wararka BBC Siyaasi caan ah oo qirtay in uu tuug ahaan jiray
BBC Siyaasi caan ah oo qirtay in uu tuug ahaan jiray
Waa mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu magaca dheer dalka Kenya, waxaana soo doortay dad gaaraya illaa 7 milyan oo qof oo ku nool caasimadda Nairobi, balse ma ahan nin ka baqaya in uu ka sheekeeyo wixii uu soo maray.
Mike Sonko waa barasaabka ismaamulka Nairobi, idaacadda la’iska arko ee Citizen inta uu soo fariistay ayuu ka sheekeeyay taariikhdii uu soo maray.
Sonko oo marti ku ahaa barnaamijka JKL ayaa barnaamijka la yimid waraaqo badan oo muujinaya musuqmaasuq ka socda maamulka Nairobi, iyo saraakiil badan oo uu shaqada ka eryay ayaa dhanka kale ka sheekeeyay taariikh nololeedkiisa.
“Waxaa habboon in aad bulshada runta u sheegto, runtana waxa ay tahay aniga waxaan soo ahaan jiray tuug, dambiile, turuufaale, balse hadda dadka Nairobi oo dhan 7 milyan oo qof ayaa igu aaminay mas’uuliyad, markii aan xildhibaanka noqday (hadda ka hor) ayaan iska dhaafay tuugonimada” ayuu yiri Soko.
Waxa uu tiriyay dhammaan xabsiyadii uu soo galay oo ay ka midyihiin xabsiyada ugu caansan dalka sida Shimo La Tewa iyo Kamithi oo lagu xiro dambiilayaasha waaweyn.
“Taas darteed ayaan aniga u ahay dawada kaliya ee kooxaha tuugada, warqad kasta oo been abuur ah oo la ii keeno waan garan” ayuu yiri Sonko oo kooxaha tuugada iyo dadka musuqa ku shaqaystay uga digay in ay ula tagaan qorshayaal wax lagu xadayo.
Barnaamijka lagu waraysanayay oo socday muddo hal saac ah, ayuu Sonko mid mid uga sheekeeyay dacwadaha musuqa ee uu xaliyay, guryo sharci daro ah oo uu dumiyay, saraakiil uu shaqada ka eryay, dacwado hadda maxkamadda uga socda oo uu isaga furtay.
Waxa uu tusaale usoo qaatay nin ganacsade ah oo uu ka dumiyay dhisme 7 dabaq ah oo kasoo horjeeda xarunta Qaramada Midoobay iyo safaaradda Maraykanka, kaas oo uu sheegay in uu jabiyay xeer hoosaadkii Nairobi ee ahaa in xaafadda dublamaasiyadda ee Nairobi aanan laga dhisi karin guri ka dheer 5 dabaq, sababo la xiriira amniga.
Si kastaba ha ahaatee, Mike Sonko ayaa guddoomiyaha Nairobi loo doortay sannadkii 2017-kii, tan iyo intii yimidna waxa uu soo kordhiyay waxyaabo iyo adeegyo aanan horey loogu aqoonin dadkii ka horeeyay.
Baraha bulshada ee uu gaarka u leeyahay ayuu marar badan ku faafiyaa waxqabadkiisa, gaar ahaan hawlaha la dagaalanka musuqa, isaga oo xitaa mar Facebook soo galain tabin toos ah xilli uu kormeerayay isbitaal ku yaala xaafadda Islii oo ay ka jirtay dhibaato.
Previous articleBBC Macluumaad cusub oo laga soo saaray dadkii ka dambeeyay dhibkii ka dhacay Jigjiga iyo Mustafe oo mar kale loo yeeray
Next articleDeg Deg, Madaxwaynaha D/degaanka soomalida ethiopia oo cabasho u diray Addis,ababa